Iindaba -Zhengzhou FangMing Ubushushu obuPhezulu kwiNew Material Co, Ltd.
I-Zhengzhou FangMing Ubushushu obuPhezulu boMbane oMtsha Co., Ltd. -Rare-Earth oxide SS yodongwe iThermal Field efakwe kwiSapphire Crystal Grower-Ukuphela komenzi onobuchule onamalungelo epropathi azimeleyo epatent.
Isafire ibizwa ngokuba yi-corundum, kwaye eyona nto iphambili kuyo yiAl2O3. Inezinto ezilungileyo ze-optical, thermal, dielectric kunye noomatshini, njl njl. Yimathiriyeli yekristale enemisebenzi emininzi enezinto ezintle kakhulu.
I-sapphire ineempawu ezibonakalayo zobulukhuni obuphezulu, ukunxiba ukumelana, uzinzo kumaqondo obushushu aphezulu, iipropathi zedizili elungileyo, ukuhanjiswa kokukhanya okuphezulu njalo njalo. Yinto ebalulekileyo ebalulekileyo kwimizi-mveliso yanamhlanje. Okwangoku, isetyenziswa ngokubanzi kwi-LED, kubathengi be-elektroniki, izixhobo, kumzi-mveliso wezomkhosi nakwezinye iinkalo.
Ezona ndlela ziphambili zemveliso yesafire ikristale enye yindlela yaseKyropoulos (KY), Vertical Horizontal Gradient Freezing (VHGF), edge-defined crystal-fed crystal grow (EFG), heat exchange method (HEM), crucible descent method (Bridgman), sol -i-gel yokudibanisa indlela yendlela yeCzochralski) kunye nendlela yokunyibilika kwedangatye (indlela yeVerneuil). Phakathi kwazo, indlela yaseKyropoulos (KY) yeyona ndlela ifanelekileyo yokukhula kweekristale ezinkulu, kwaye ixabiso lemveliso liphantsi, eyona ndlela ixhaphakileyo yokuvelisa ekhaya nakumazwe aphesheya.
Indlela ye-Kyropoulos (KY) luhlobo lwendlela yokukhula kwekristale eyilwe yi-kyropoulos evela eRussia ukukhulisa ikristale enye kulwelo olutyhidiweyo. Ngoku isetyenziswa ngokubanzi ekukhuleni kwesafire enye. Umahluko omkhulu kwezinye iindlela zokukhula kukuba kukho uninzi lweekristali ezinyibilikayo kwinqanaba lokuphakama kunye nenqanaba lobubanzi obulinganayo. Ngenxa yeempawu zayo zekristal kwinkqubo yekristallisation, iikristali zingakhula ziye kwinqanaba elithile. Ukuba iqondo lobushushu lisetiwe ngokufanelekileyo, i-crystallization eqhubekayo yeekristali inokufezekiseka ngaphandle kokutsala imbewu iye phezulu, kwaye yonke inkqubo yokukhula inokugqitywa.
I-Zhengzhou Fangming iqondo lobushushu eliphezulu i-ceramic New Material Co, Ltd. umtyali wekristale. Emva kweminyaka emibini ye-R & D eqhubekayo, ngoMeyi ka-2016, ibhetshi yentsimi ye-ceramic ye-thermal yendlela ye-KY eyi-120 kg kunye nomlimi ophakamileyo weSapphire waveliswa ngempumelelo. Emva koko isetyenziswa ngokubanzi kwi-sapphire, izityalo ze-crystal crystal e-China zisebenzisa, kwaye zithunyelwa eRashiya, eU.SA nakwezinye iindawo, kwaye zaziwa kakhulu kubo.
Okwangoku ngo-2016, i-Fangming NewM yayisebenzisa i-thermal field ye-sapphire grower kwi-ofisi yelizwe lobunikazi. NgoJuni, ngo-2019, safumana ilungelo lobunikazi be-yttrium e-zirconia e-SS eqinileyo ye-ceramic field ye-ultra-high temperature ye-crystal grower. Inombolo yelungelo elilodwa lomenzi ngu-201610274897.6. Ukusukela ngoko, i-Fangming NewM iye yaba kuphela komenzi wobuchule onamalungelo epropathi azimeleyo epatent.
Uhlobo olutsha lwentsimi ye-ceramic thermal eyakhiwe ngokuzimeleyo kwaye iveliswe yi-Fangming NewM inezi zinto zilandelayo:
Ngaphantsi kwe-vacuum kunye nezinye ii-atmospheres ezikhuselayo, iqondo lobushushu lokusebenza kwentsimi ye-thermal inokufikelela kuma-2650 ℃.
2. Phantsi kwendawo yokutsala, ngaphezulu kwe-1800 ℃ imeko, ioksijini ikhutshwa ngaxeshanye.
3. Ukuhlehlisa kwaye ukhusele ubomi benkonzo yezinye izixhobo zentsimbi kwicandelo lobushushu.
4. Ukuphindaphinda okuphindiweyo kunye nokuhlisa ubushushu obusebenzayo, ubomi benkonzo yomjikelo yiminyaka emi-3, iphakamisa amaxesha ama-6 ubude kunalawo asentsimini obushushu.
5. njengomzekelo wentsimi ye-thermal yeklasi ye-120kg yekristale, xa kuthelekiswa nentsimbi ye-thermal field, ixesha lokukhula lifutshane ngama-25% kwaye ukusetyenziswa kwamandla kugcinwa ngaphezulu kwama-40% xa kuthelekiswa nentsimbi enye.
6. Yaphula indawo yokuthanjiswa kwendawo enkulu yokufudumeza kwekristale kwaye uqaphele imveliso yemveliso enkulu yekristale.
I-Ultra-high-temp zirconia izinto ezikhethekileyo zodongwe kunye neemveliso, siya kubonelela ngezisombululo ezihlanganisiweyo ezijikeleze ubushushu be-temp-high-temp.tempression, ukumelana okuphezulu kukhukuliseko lomhlaba kunye neemeko zokufaka ukhukuliseko oluphezulu.
Zhengzhou Fangming High-Temp yodongwe Entsha Izinto Co., Ltd.
Yongeza: Indawo yoShishino lweShiqiao, Idolophu yaseGoutang, iXinmi, iHenan, China
Ifowuni: + 86-371-69258566 (Ifektri) + 86-371-53393916 （Zhengzhou)
Ifeksi: + 86-371-69258566 (Ifektri) + 86-371-53393916 （Zhengzhou)
Iwebhu: www.chinafmxc.com imeyile: sales@chinafmxc.com
Ixesha Post: Jan-01-2020